လူနာနံပါတ် ၂၇ဟာထိုင်းနိုင်ငံမှာ အတည်ပြုလူနာ ဖြစ်ပြီး.မြန်မာပြည်ထဲ ခိုးပြန်လာကာ ဆေးရုံကို လိမ်ညာခဲ့ခြင်းဖြစ်နေ – Burmese.asia
Homepage / News / လူနာနံပါတ် ၂၇ဟာထိုင်းနိုင်ငံမှာ အတည်ပြုလူနာ ဖြစ်ပြီး.မြန်မာပြည်ထဲ ခိုးပြန်လာကာ ဆေးရုံကို လိမ်ညာခဲ့ခြင်းဖြစ်နေ
လူနာနံပါတ် ၂၇ဟာထိုင်းနိုင်ငံမှာ အတည်ပြုလူနာ ဖြစ်ပြီး.မြန်မာပြည်ထဲ ခိုးပြန်လာကာ ဆေးရုံကို လိမ်ညာခဲ့ခြင်းဖြစ်နေ
By Myo Min HtetPosted on April 11, 2020
လူနာနံပါတ် ၂၇ဟာ. .ထိုင်းနိုင်ငံမှာ အတည်ပြုလူနာ ဖြစ်ပြီး. .မြန်မာပြည်ထဲ ခိုးပြန်လာကာ ဆေးရုံကို လိမ်ညာခဲ့ခြင်းဖြစ်နေဒေါက်တာပြည့်ဖြိုးလှိုင် (ကျိုက်မရောဆေးရုံ)ရေးတဲ့စာ. .တကယ့်ကို ရင်နာကြေကွဲစရာ လိမ်ရက်ညာရက်လိုက်တာCase-27 ကျိုက်မရော ဆေးရုံက Positive လူနာကအရင် ထိုင်းမှာ စစ်ကတည်းက Resultက Positive ထွက်ပြီးသား ခိုးပြီးပြန်လာတာတဲ့ ။ကျိုက်မရောဆေးရုံက သူ့အတွက်နဲ့Quarantineတွေလုပ်၊ Swabတွေယူ၊တဆေးရုံလုံး အလုပ်တွေရှုပ်နဲ့ စောစောကတည်းက အမှန်ကို ပြောပြလိုက်ပေါ့။
အခုတော့ အကုန်လုံး နေရတာ စိတ်ထဲ မသန့် မသန့်နဲ့ Covid-19ဟာ Oropharyngeal Swabမှာ ၁၄ရက်ကြာ ရှိသလို Anal Swab မှာ ၂၈ရက်ထိ ကြာကြာ ရှိနေနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့် ကျွန်တော်ကတော့ Stay at Home Self Q လုပ်ပါတော့မယ်…။ပြည်တော်ပြန်များ ခင်ဗျား.ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဌာနကသတင်းတွေကို နားထောင်ပါ။ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဌာနက ညွှန်ကြားချက်များအတိုင်း လိုက်နာပါ။
ကျွန်တော့်အမေက ကျွန်တော့်ကို ပြောဖူးတယ် ဘာလဲ ဆိုတော့”မရှိတာထက်မသိတာ ပိုခက်တယ်”တဲ့. .ပြည်တော်ပြန်များ ခင်ဗျား. .”အသိခေါက်ခက်အဝင်နက်တယ် မလုပ်ကြပါနဲ့”ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းများအားလုံးကိုကူညီပါ၊ရိုင်းပင်းပါ၊ဝိုင်းဝန်းကြပါ. .လက်ဆေးပါ.Mask တပ်ပါ.Stay at Homeမလိမ်ပါနဲ့၊မညာကြပါနဲ့ ခင်ဗျာ။
Source : Dr Pyae Phyo Hlaing
Previous post သူမရဲ့မောင်လေးနဲ့အတူ တတ်နိုင်သလောက်အလှူအတန်းတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ပိုးကြာဖြူခင်
Next post OPPO မှ ကိုဗစ်၁၉ ရောဂါ ကာကွယ်‌ရေးနှင့် ကုသရေး လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် ကျပ်သိန်း ၂၀၀ လှူဒါန်း